MIBVUNZO - Iyo Kdom
VANOTI KRISTU VANOSANGANA NEGLOBAL MERCHANTS NEJEWELRY ARTISans MUZVO KUTI VAKUDA KUTI UNOGONA KUPEDZESA ZVINHU ZVINONYANYA UYE UNIQUE GLOBAL SHOPING SHOPING.
Chinangwa chedu ndechekukupa iyo yakanyanya kunaka yekutumira sarudzo, zvisinei kuti unogara kupi. Zuva rega rega, tinosvitsa kumazana evatengi pasi rese, kuve nechokwadi chekuti isu tinopa iwo akanyanya kukwirisa mazinga ekuteerera kwauri nguva dzese.
Parizvino, tinopa Kutumirwa KWEMAHARA Pasi Pese on vakawanda zvinhu mudura redu.
Q: Ndeipi Zvinhu Zvangu Zvinotumira Kubva?
Chero zvigadzirwa zvakadai seshangu, mabhegi, zviri kutumirwa kubva kuAsia. Kunyangwe zvigadzirwa zvedu zvichiuya zvichibva kuAsia, mhando iri pachena, nguva dzekutumira dzinokwikwidza uye mitengo yedu haina kurwirwa.
Zvimwe zvese zvigadzirwa zvakadai zvipfeko zvakadhindwa (T-shira, sweta, hoodies, nyaya dzefoni, nezvimwewo) zvinotumirwa zvakananga kubva kune vedu vatengesi mune nyika dzakabatana.
Zvinhu zvedu zvetsika zvakadhindwa zvinhu zvinotumirwa pamwe DHL KUSVIRA!
Mubvunzo: Ndeapi Anofungidzirwa Ekutumira Nguva Pane My Orders?
Zvigadzirwa Zvikuru (T-Shirts, Sweatshirts, Hoodies, majeti, Hats, Mouth Masks, kumashure
Nguva yekugadzira: 2-4 Mazuva
US, UK, CA, AUS Dhizimusi Nguva Yekufungidzira: 12-25 Mazuva (EMS NaKutya Kutsvaga)
US, UK, CA, AUS main product yechigadzirwa iyo isati yasvika mukati memazuva makumi matanhatu ekugadziriswa kwekuraira inokodzera kudzoserwa kana kusununguka kwemahara.
Yepasi Pose Dhirivhari Nguva Inofungidzirwa: 2-4 Mavhiki (Hazvireve Yekupedzisira Kwamuno Tevera)
Maodhi epasi rose asina kusvika mukati memazuva makumi matanhatu ekugadziriswa kwemaodha anokodzera kudzoreredzwa kana kuregererwa kwemahara.
Dhirivha Nguva Yekufungidzira: Mazuva 10-14 (dhl NaKutya Kutsvaga)
Chero chero madhiri epiro asina kusvika mukati memazuva makumi mashanu ekugadziriswa kwemaodha anokodzera kudzoreredzwa kana kuregererwa kwemahara.
Nguo Tote Mabhegi
Dhirivha Nguva Yekufungidzira: 10-14 Mazuva (dhl NaKutya Kutsvaga)
Chero chero machira tote odha asina kusvika mukati memazuva makumi mashanu ekugadziriswa kwemaodha anokodzera kudzoreredzwa kana kuregererwa kwemahara.
US, UK, CA, AUS Dhizimusi Nguva Yekufungidzira: 10-25 Mazuva (EMS NaKutya Kutsvaga)
US, UK, CA, AUS crew sock maodha ayo asina kusvika mukati memazuva makumi mana ekugadziriswa kwemaodha anokodzera kudzoreredzwa kana kuregererwa kwemahara.
Yenyika Dzese Dzinonongedzera Inofungidzirwa: (Haisi iyo Yekupedzisira Kupa Yekutevera)
Vashandi vepasi rese vashandi sock vasina kusvika mukati memazuva makumi matanhatu ekugadziriswa kwemaodha vanokodzera kudzoreredzwa kana kudzoserwa kwemahara.
Leather Tote Mabhegi uye Mabags
Nguva yekugadzira: 4-6 Mazuva
Chero mabhegi maodha asina kusvika mukati memazuva makumi mana ekugadziriswa kwemaodha anokodzera kudzoreredzwa kana kuregererwa kwemahara.
Canvas Saddle Mabhegi
Nguva yekugadzira: 5-7 Mazuva
Chero chero bhutsu maodha asina kusvika mukati memazuva makumi mana ekugadziriswa kwemaodha anokodzera kudzoreredzwa kana rezve reshipment.
Mubvunzo: Ndini Ndichagamuchira Rini Rwekutevera Ruzivo Pane Yangu Order (s)?
Nhamba dzekutevera dzichaitwa kuti dzivepo mukati meiyo nguva yakatarwa mafurati ari pazasi uye anozotumirwa otumira kune vatengi kuburikidza neemail yakapihwa mune yavo yekuraira.
Mbiru Covers: Mazuva mashanu mushure mekugadziriswa kwekuraira.
Mucheka Tote Bags: Mazuva 5-7 mushure mekuraira kugadzira.
Crew Masokisi: Mazuva mashanu mushure mekugadziriswa kwemaodha.
Leather Tote Bags: Mazuva 7-10 mushure mekugadziriswa.
Mahombekombe Mabhegi: Mazuva manomwe kusvika gumi mushure mekugadziriswa
Canvas Saddle Bags: Mazuva 7-10 mushure mekugadziriswa kwechirongwa.
Canvas Shoes: 7-10 mazuva mushure mekurongeka kwekugadziriswa.
Dzimwe: Mazuva 5-7 mushure mekugadziriswa kwekuraira.
Q: Nei Isiri Iyo Yekutsvaira Data Inoratidza Pane Rangu rekutevera Nhamba?
Kune maAmerican ekutevedzera nhamba yekutevera inogona kutora kusvika kumazuva manomwe mushure mekuti kodhi yakagadziriswa yekutsvaga data kuratidza. Ita shuwa kuti urikushandisa iyo chaiyo yekutevera nhamba uye unogona kuitevera td.com
Kune epasi rose maodha ekuteedzera manhamba anogona kutora kusvika kumazuva gumi mushure mekunge odha yakagadziriswa yekutevera data kuratidza Ita shuwa kuti urikushandisa iyo chaiyo yekutevera nhamba uye iwe unogona kuitevera iyo td.com. Izwa kurairwa, epasi rose maodha haadzoreki kana angotumirwa uye haizoratidze dhata rekuendesa kwariri
Q: Ndinoda Kuchinja / Cancel An Order, Ndingaite Sei Kuti?
Isu tinoshanda pane Chero chekutengesa chirongwa chekupedzisira. Izvi zvinoreva kuti haugone kudzima, kudzoka, kana kugamuchira mari yekudzoreredza kana ikasava yekupedzisira pane yedu.
Iwe unogona kuverenga zvakawanda nezve yedu yekudzosa mutemo pano.
Mubvunzo: Ini Handisi Kufara Neye Shangu Saizi Uye Yakakodzera. Ndoita sei?
Muchiitiko chisingawanzo kuitika chekuti mutengi asinganetseke nekukodzera kwehangu shangu, isu tichagadzirisa imwe-nguva yemahara yekuchinjana mutengi.
Kudzoserwa hakuzopihwe maishu mukukanganisa, kuchinjaniswa kunobvumidzwa.
Mahara Ekushambadzira anongobvumirwa kamwe chete pane shangu yekuraira. Chero mutengo wakanangana nekuchinjana wakapfuura wekutanga mahara uchinjana unofanirwa kuvharwa nemutengi.
Kuti iyo yemahara yekuchinjana ishandiswe, vatengi vanofanirwa kupa zvinotevera ruzivo:
chikonzero chekuti shangu iyi yanga isingakwane (kureva idiki kwazvo, ihuru kwazvo, yakanyanya)
hukuru hutsva hwakakumbirwa nemutengi
zita remutengi uye nhamba yekuraira
Iwe hauzombodikanwa kudzorera shangu dzepakutanga kuti ugamuchire yekushambadzira kwemahara pasi pemutemo uyu.
Kuti tideredze njodzi yekuisa sizing nyaya, isu takapa saizi machati pane edu zvigadzirwa zvirevo mapeji e canvas shangu, suede bhutsu.
Saizi yekuchinjana zvikumbiro zvinosiyana neanopfuura maviri masayizi kubva kune yekutanga saizi yakarairwa inozotorwa seyevatengi-yekupinza kukanganisa uye haizokodzere kuchinjana
Q: Inoti Kero Yangu Haisi Kuwanikwa
A: Isu tinotumira tichishandisa iyo United States Post Office. Kana iwe uine po bhokisi uye usatumira tsamba pakero yako yepanyama, iwe unofanirwa kushandisa iyo PO bhokisi. Iyo yekutarisirwa inogona kuve inokanganisa pane yakatarwa manongedzo zvakare. USPS.com "tsvaga zip code" inogona kubatsira iwe kuwana yako chaiyo yekufupikiswa uye kuti USPS ichavimbisa sei kero yako.
Q: Handinzwisisi Yako Shirt Sizing Chati.
A: Kana ukarongedza hembe iwe yaunayo ikozvino yakagadzikana uye kuyera nechepazasi pemapendero, unokwanisa kuwana chimwe chinhu chiri padhuze pane chati chedu chinoshanda kwauri. Rangarira, zviyero zviri mu chati ndezvehembe, kwete munhu uyo ​​anorehwa kupfeka.
Q: Ndinodzoka sei kana kuchinjana yangu Shirt?
A: Nditumirewo Email kwatiri kutsigiro@thekdom.com uye utizivise dambudziko iri! Isu tichashanda newe kugadzirisa nyaya yacho. Ndokumbirawo rangarira, aya itsika dzakadhindwa mashati, akagadzirwa kurongeka. Kana zvadhindwa, hatigone kuadhinda kana kuadzosera kuchitoro. Nekudaro, isu tichaedza kushandira chimwe chinhu kuti tizive kuti iwe wagutsikana nekutenga kwako!
Kana kudzorera kuchinge kwatsungirwa kuve kwakarongeka, tinobva tadzorera mubhadharo wemutengo wepakutanga wehembe nekukurumidza sezvazvinogona. Kudzosera mari kazhinji kunotora mazuva ebhizinesi mairi kuti riite kana tangovapa. Kana iwe uchida kuita chinjana ndapota ita shuwa kuti ubatanidze ruzivo rwekubhadhara kudzoka kwekutumira.
Q: Iko Kune Inokundikana Rondedzero Yakatenderera Yangu Shirt Dhizaini.
A: Mamwe mahembe ari pre-kurapwa usati wadhindwa. Usazvidya moyo, zvichanyangarika kekutanga uchigeza shati.
Q: Wakaita Chikanganiso pane Yangu Order.
A: Tine urombo kwazvo. Izvo hazviitike kazhinji, asi hapana akakwana. Email rutsigiro@thekdom.com uye isu tichashanda newe kuti tigadzirise. Kazhinji, izvi zvinongoda kuti utitumire mufananidzo wekukanganisa kwatakaita kuti tikwanise ku) revera chako uye b) kukufonera kuti ugadzirise.
Q: Ini akaraira 2+ zvinhu, asi chete akagamuchira imwe ... iripi yangu kurayira?
Tine assortment yakakura yezvigadzirwa zvisina kuiswa mumba. Nekudaro, kana iwe uchiraira zvinhu zvakawanda panguva, zvinogona kutumirwa zvakasiyana saka zvinosvika kwauri nekukurumidza. Unogona kugamuchira chinhu chimwe pamberi pechinotevera, saka ndapota usatya kana ukasagamuchira zvese zvako zvinhu kamwechete, ingo rangarira kuti ivo vari munzira!
Q: Ndinoziva Sei Iyi Webhusaiti Yakachengeteka?
Isu takachengetedzwa neShopify, inozivikanwa E-Commerce chikuva. Zvakare, isu tinovimbisa YAKachengeteka & YAKachengeteka CHECKOUT. Kubhadhara kunoitwa kuburikidza neShopify kuburikidza nemakambani makuru emakadhi anoratidzwa mumufananidzo pazasi. Hatina mukana wekuwana chero ruzivo nezve iwe kana kadhi rako.